हामीले फेरेको हानिकारक सास - विचार - कान्तिपुर समाचार
रत्नपार्कको जस्तै गुणस्तर भएको हावामा चौबीस घण्टासम्म सास फेर्नु भनेको दैनिक ६ खिल्ली चुरोट खानुबराबर हो ।
वार्षिक ४२ हजार नेपालीको ज्यान लिने, हाम्रो औसत आयुलाई ४.७ वर्ष घटाउने वायु प्रदूषणप्रतिको हाम्रो चरम बेवास्ता चिन्ताजनक छ ।
मंसिर १७, २०७७ उत्तमबाबु श्रेष्ठ
काठमाडौँ — २०७७ मंसिर १७, बुधबार बिहान, यो लेख तयार पार्दै गर्दा काठमाडौंको मुटु मानिने रत्नपार्कको हावामा पीएम २.५ भनिने सूक्ष्म धूलोका कणको मात्रा ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को मापनमा १९५ थियो । सोही समयमा काठमाडौं उपत्यकाका अन्य चार स्थानमा राखिएका त्यस्ता मापनकेन्द्रहरू — भैंसेपाटी, झम्सीखेल, फोहरा दरबार, अमेरिकी दूतावास महाराजगन्ज — मा पीएम २.५ को मात्रा क्रमशः १६०, १३४, १५९ र १२२ थियो ।
विश्वभर पीएम २.५ भनिने मसिना धूलोका कणलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्त्व मानिन्छ । हावामा पीएम २.५ को मात्रा १५१ भन्दा बढी भएमा अस्वास्थ्यकर र १०१–१५० भएमा वृद्ध, बच्चा र रोगीहरूजस्ता संवेदनशील समूहका मानिसका लागि हानिकारक मानिन्छ । उपत्यकाका यी ठाउँहरूमा जस्तै पीएम २.५ को मात्रा १५० भन्दा बढी भएमा मानिसलाई लामो समयसम्म बाह्य हिँडडुल लगायतका खुला दैनिक कामहरू नगर्ने सल्लाह दिइन्छ । किनभने रत्नपार्कको जस्तै गुणस्तर भएको हावामा चौबीस घण्टासम्म सास फेर्नु भनेको दैनिक छ खिल्ली चुरोट खानुबराबर हो । केही वर्षयताको नेपालको वायु प्रदूषणको अवस्था हेर्दा, अबको छ महिनाभर वर्षातले आकाशको धूलो नझारेसम्म हामीले सास फेर्ने हावा यस्तै हानिकारक नै रहिरहनेछ । त्यति बेलासम्म हामीले हजारौं खिल्ली चुरोट खाइसकेका हुनेछौं । धूमपान नगरे पनि चुरोटको धूवाँसमान विषाक्त हावामा सास फेर्नु यतिखेर हाम्रो दैनिकी बनेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालको वर्षभरिको हावाको सरदर गुणस्तर उक्त संगठनले तोकेको ‘स्वस्थ हावा’ को मापदण्डभन्दा लगभग १० गुणा र नेपालको सरकारी मापदण्डभन्दा दोब्बर हानिकारक छ । धेरैलाई लाग्छ— नेपालमा काठमाडौं मात्रै प्रदूषित छ तर बुधबार बिहान पोखरा र तुलसीपुर दाङको हावाको गुणस्तर काठमाडौंको भन्दा पनि खराब थियो । हिजोआज वायुको स्वच्छताको मापन जमिनमा राखिएका यस्ता मेसिनबाट मात्रै होइन, स्याटेलाइटबाट समेत गरिने भएकाले यस्ता मापनकेन्द्र नभएका ठाउँहरूको हावाको गुणस्तर सजिलै थाहा पाइन्छ । त्यसरी जमिनदेखि आकाशसम्मबाट लिएका वायु गुणस्तरका तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर बर्सेनि विश्वभरिका देशहरूको वायु प्रदूषणको अवस्थाका प्रतिवेदनहरू तयार पारिन्छन् । तिनैमध्येको एक, भर्खरै सार्वजनिक भएको अमेरिकाको बोस्टनस्थित हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले तयार पारेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ प्रतिवेदनले नेपाललाई भारतपछि विश्वकै दोस्रो अधिक वायु प्रदूषित देश भनेर चित्रित गरेको छ ।
नेपालको नयाँ परिचय— फोहोरी देश
संसारभर नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक परिचय छ— हिमाल, बुद्घ, शेर्पा र गोर्खाको देश जसमा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्छन् । त्यसै गरी दक्षिण एसियाली देशहरूका पनि भिन्नभिन्न ऐतिहासिक पहिचान छन् । तर पछिल्लो समय नेपालसहित दक्षिण एसियालाई विश्वकै वायु प्रदूषणको केन्द्रस्थल (हटस्पट) भनिन्छ । स्विटजरल्यान्डस्थित आईक्यू एयर — जसले संसारभरका ६० हजार मापनकेन्द्रको तथ्यांकका आधारमा विश्वभरको वायु प्रदूषणको अवस्था तत्कालै इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध गराउँछ — का अनुसार, सन् २०१९ मा उच्च प्रदूषण भएका संसारका ३० ठूला सहरमध्ये २७ वटा दक्षिण एसियाली थिए । उक्त संस्थाले प्रत्यक्ष (रियल टाइम) दिने तथ्यांक यो लेख तयार पार्ने क्रममा हेरिरहँदा विश्वका अधिक प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली सहरहरू क्रमशः कराँची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाकासँगै ११ औं नम्बरमा काठमाडौं उक्लिँदै थियो ।
पछिल्लोपटक हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले तयार पारेको जनसंख्याको अनुपातमा वायु प्रदूषणको अवस्थाको सूचकांकमा मात्रै होइन, नेपालसहित दक्षिण एसियाको वायु प्रदूषणको समग्र अवस्था एक दशकभन्दा अघिदेखि नै यसरी निरन्तर खस्किरहेको छ । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले बर्सेनि तयार पार्ने वातावरणीय निष्पादन सूचकांक (इन्भाइरोमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स) — जसमा वायु प्रदूषण लगायतका ३२ वातावरणीय सूचकांक समेटिएका हुन्छन् — का अनुसार, सन् २०२० मा नेपालको वातावरणीय निष्पादनको अवस्था १८० देशमध्ये १७८ औं थियो । नेपालभन्दा पछि पाकिस्तान (१७९ औं) र भारत (१८० औं) थिए । त्यसै गरी वायु प्रदूषणको मात्राले मानिसको आयुलाई पार्ने प्रभावका आधारमा बनाइएको अर्को सूचकांक ‘एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स (एक्यूएलआई)’ ले विश्वमा बंगलादेशलाई पहिलो, भारतलाई दोस्रो र नेपाललाई तेस्रो खराब मुलुक भनेको छ । एक्यूएलआईले २३५ देशको वायु प्रदूषणको गुणस्तरले मानिसको औसत आयुमा पार्ने प्रभावलाई मापन गर्ने गर्छ । उक्त सूचकांकमा सन् १९९८ देखि नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूको अवस्था थोरै तल–माथि भए पनि समग्रमा निरन्तर गिर्दो छ । अर्थात्, नेपालसहित दक्षिण एसियाको आकाश संसारमै सबैभन्दा फोहोर छ ।
वातावरणीय होइन, जनस्वास्थ्यको समस्या
वायु प्रदूषणको कुरा प्रायः वातावरणसँग सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूले उठाउने भएकाले धेरैले यसलाई वातावरणीय मुद्दा ठान्छन् । तर यसको असर वातावरणमा भन्दा बढी मानव स्वास्थ्यमा पर्छ । मानिसको ज्यान लिने, आयु घटाउने र विभिन्न रोग लगाउने भएकाले यो नितान्त जनस्वास्थ्यको सवाल हो । मानिसले प्रकृतिबाट लिने वस्तुहरू गाँस, बास, कपास र सासमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु सास हो । किनभने दैनिक एक किलोजति गाँस (ठोस आहार) खाने मान्छेले, दैनिक १५ किलो सास फेर्छ । त्यसरी शरीरलाई अत्यधिक चाहिने र नभई नहुने वस्तु हावा नाकबाट शरीरभित्र पसेर फोक्सो हुँदै मुटुमा पुगी रगतसँग मिसिएर शरीरभरि यत्रतत्र फैलिन्छ । त्यसकारण, शरीरको प्रत्येक कोषमा पुग्ने तत्त्व नै हानिकारक भएपछि त्यसले स्वतः शरीरमा रोग लगाउँछ । वायु प्रदूषणले श्वास–प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरू दम, ब्रोङ्काइटिसका साथै हृदयाघात, मुटुको रोग, फोक्सोको क्यान्सर पनि गराउँछ ।
‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ ले वायु प्रदूषणलाई सन् २०१९ मा संसारभरका मान्छेको मृत्युका १० प्रमुख जोखिमहरू उच्च रक्तचाप, धूमपान, खानपानको गडबडी, कुपोषण आदिमध्ये चौथो प्रमुख जोखिम मानेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार, वायु प्रदूषणजन्य यिनै रोगहरूका कारण विश्वभर बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ, जसमध्ये दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन् । वायु प्रदूषणको बोझका कारण भारतमा मात्रै गत वर्ष १६ लाखभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको थियो । उक्त संख्या नेपालमा ४२ हजार छ, जसमध्ये २,५०० भन्दा बढी नवजात शिशु पर्छन् ।
शिकागो विश्वविद्यालयका अध्येताहरूले गरेको अनुसन्धानले वायु प्रदूषणले मानिसको औसत आयु घटाउने देखाएको छ । विश्वभरका ९० प्रतिशत मानिस विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषित वातावरणमा बस्छन् जसले विश्वका मानिसको औसत आयु लगभग दुई वर्षले छोट्याएको छ । वायु प्रदूषणका कारण आयु घट्ने दर नेपालमा ४.७ वर्ष, भारतमा ५.२ वर्ष, बंगलादेशमा ६.२ वर्ष र चीनमा २.३ वर्ष छ ।
गरिबी प्रदूषण र समृद्घिको चक्र
विकासको उचाइमा पुगेका देशहरूमा आर्थिक विकास र वातावरणको सम्बन्धलाई हेर्दा गरिबी, प्रदूषण र समृद्घिको पर्वताकृतिको वक्ररेखा देखिन्छ । वातावरणीय क्रुजनेट वक्ररेखा (इन्भाइरोमेन्टल क्रुजनेट कर्भ) भनिने यस मान्यताका अनुसार, गरिब देशले आर्थिक विकासको पर्वत चढ्दा त्यहाँ प्रदूषण थुप्रिन्छ र समृद्घिको एउटा उचाइमा पुगेपछि प्रदूषणको मात्रा उल्लेख्य घट्छ । औद्योगिक क्रान्तिको नाभिस्थल लन्डनको सन् १७००–१९०० सम्मको वायु प्रदूषण काठमाडौंको हालको भन्दा लगभग चार गुणा बढी थियो । तर अहिले प्रदूषण घटेर लन्डनको वायु वर्षातको काठमाडौंको जस्तै छ । इतिहासमा लन्डनदेखि पछिल्लो समयका मेक्सिको सिटी र बेइिजङसम्मले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा पाएको सफलताले देखाउँछ— वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । तर त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, अनुसन्धानमा आधारित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनका साथै प्रदूषणप्रतिको धारणामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा सफल भएका देशहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि प्रदूषणका स्रोतहरूमै नियन्त्रण, ऊर्जाको उपभोगमा फेरबदल, प्रदूषण घटाउने नीतिनियमको कार्यान्वयनका साथै मानिसको स्वभावलाई परिवर्तन ल्याउने चेतना र उत्प्रेरणा नै हुन्, जुन नेपालमा धेरै अघिदेखि नै भनिँदै आएका कुराहरू हुन् ।
नेपालमा वायु प्रदूषणका कारकहरूमा आन्तरिक रूपमा सवारी साधनको धूवाँ, घरेलु कृषि फोहोर दहन, सडक र बाटाहरूका धूलो र इँटाभट्टा लगायतका उद्योगहरूबाट निस्केको धूवाँ आदि हुन् भने, बाह्य रूपमा भारतमा कृषि–कुडाकर्कट दहनले ल्याउने धूवाँ हुन् । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति बदल्ने सुविधा हामीसँग छैन । त्यसकारण प्रदूषणको बाह्य कारकलाई सुल्झाउन तत्कालै नसके पनि आन्तरिक कारकहरूलाई कम गर्न सकिन्छ ।
तर अहिलेसम्मका वायु प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासहरू हचुवा र फितलो साबित भएका छन् । जस्तै ः नेपालले सन् २०१६ मा बनाएको राष्ट्रिय योगदानको निर्धारित प्रतिबद्घतामा सन् २०२० सम्ममा नेपालको कुल सवारी साधनको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यविपरीत हालै सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट खारेज गरिदियो, जसका कारण उक्त गाडीको आयात र बिक्री यतिखेर ठप्प छ । सुरुमा मानिसको आनीबानी बदल्न प्रदूषण घटाउने विद्युतीय साधनमा मात्रै होइन, पैदल र साइकल यात्रुको उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक फुटपाथ र साइकल लेन बनाउन अनि पैदल र साइकल चढेर अफिस/स्कुल आउजाउ गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने इँटाभट्टाहरूको रूपान्तरण र स्थानान्तरणको मुद्दा दुई दशकभन्दा बढीदेखि गफमै सीमित छ । पछिल्लो समयमा त्यस्ता भट्टाहरूले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै तिनलाई सार्न स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलनमै उत्रँदासमेत त्यो काम हुन सकेको छैन ।
यस्ता नीतिगत र ठूलै प्रयत्न चाहिने काम मात्रै होइन, पूर्वाधार निर्माण गरिँदा त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरलाई घटाउने सामान्य सजगतासमेत अपनाइँदैन । वातावरण विभागको अध्ययनले वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत निर्माणक्रममा उड्ने धूलो भनेको छ । तर निर्माण आयोजनाहरूमा खनेको ठाउँलाई धूलो नउड्ने बनाउन पातपतिङ्गरले छोप्ने त परै जाओस्, उड्ने धूलो कम गराउन पानी छर्कने सामान्य कामसमेत गरिँदैन । बरु उल्टै सडक पिच गर्दा भ्याकुम लगाएर बुङबुङ्ती धूलो उडाइन्छ ।
अन्त्यमा, राजनीतिक पक्षलाई बिर्सने हो भने १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको जनयुद्घको व्यवस्थापनमा देशले ठूलो धनराशि, समय र सामर्थ्य खर्च गर्‍यो । ९ हजार मान्छे मार्ने भूकम्पको पुनर्निर्माण अझै चल्दै छ । तर वार्षिक ४२ हजार नेपालीको ज्यान लिने, हाम्रो औसत आयुलाई ४.७ वर्षलाई घटाउने वायु प्रदूषणप्रतिको हाम्रो चरम बेवास्ता चिन्ताजनक छ । युद्घमा जस्तो बम र गोली नपड्काईकन, भूकम्पमा जस्तो भौतिक संरचनाहरू नभत्काईकन बिस्तारै मान्छे मार्ने सुषुप्त हत्यारा वायु प्रदूषणलाई जनता, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसै छोड्न मिल्ला ?
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ १९:०७
'सबै क्षेत्र खुल्यो, फिल्म हल कहिले खोल्ने ?'
निर्माता भन्छन्, 'हल नखोले टिकटक र म्यूजिक भिडियो बनाएर बसे भो !'
मंसिर १७, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — बानेश्वरको आइप्लेक्स मलमा मानिसको चहलपहल उस्तै छ जसरी कोभिडअघिका समयमा हुने गर्दथ्यो । पसलहरु खुलेका छन् । ग्राहकहरु आउने जाने क्रम जारी छ । पार्किङमा गाडी भरीभराउ छन् । पहिलाझैं अस्तव्यस्त देखिने यो महलमा खाली एउटा कुरा भने बन्द छ- मलभित्रको फिल्म हल ।
मलको होहल्लाबीच मौन रहेका हलहरुको चित्रण गर्छ यो वान सिनेमाजले । टिकट काउन्टर धुलाम्मे छ । हल प्रवेश द्वार खाली देखिन्छ । दर्शकको हाँसो, रोदन र ताली गुञ्जने हल चकमन्न छ । फुड काउन्टर आफैं भोकोजस्तो देखिन्छ । सँधै उज्यालो बत्तीहरु बलिरहने प्रतीक्षालय अँध्यारो छ । यहाँ दर्शकको आउजाउ नभएको ९ महिना भयो ।
सोमबार वान सिनेमाज पुग्दा केही मानिस हलको सरसफाइमा व्यस्त देखिन्थे । पीपीई सुटमा एकजना हलका सिटमा डिसइन्फेक्ट गर्दै गरेका भेटिए । 'सरकारले हल खोल्न कहिले देला थाहा छैन तर हामी त तयार बस्नु पर्‍यो । भोलिबाट खोल भन्यो भने पनि खोल्ने भनेर तयार बसेको अवस्था हो यो,' सरसफाइका काम नियालिरहेका वान सिनेमाजका म्यानेजर उमेशराज गिरीले बताए । उनका अनुसार हरेक हप्ता हलको सरसफाइ गरिन्छ । प्रोजेक्टर, जेनेरेटरको सर्भिसिङ हुन्छ । दर्शक बस्ने सिट र कार्पेटमा धुलो बस्न नदिन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
धेरैजसो फिल्मको कार्यक्रम भइरहन्थ्यो कुमारी हलमा । कार्यक्रम नभए पनि कलाकार र दर्शकको आउजाउ हुन्थ्यो । ९ महिना भयो यो हलको ढोकामा ताला झुन्डिएको । कुमारी हलको दृश्य पनि वान सिनेमाजको भन्दा फरक छैन । टिकट काउन्टरको छेउमा बलिउड फिल्म 'थप्पड', 'अंग्रेजी मिडियम' र नेपाली फिल्म 'आमा'को पोस्टर टाँसिएको छ । पार्किङ क्षेत्र खाली छ । हलको प्राङ्गणमा दर्शकको जुत्ता/चप्पलको छाप भेटिँदैन । हलमा गुँड बनाएर बसेका चराचुरुङ्गीको प्वाँखहरु प्राङ्गण वरिपरि छरिएको भेटिन्छ ।
दर्शकको बाक्लो भीड रहने यो हल पुग्दा सुरक्षामा खटिएका सेक्युरिटी गार्ड कुमार रानामात्रै भेटिए । काम गरेको डेढ वर्षमा कहिल्यै उनले कुमारी हललाई यसरी एक्लो देखेका थिएनन् । 'पहिला त भिड हुन्थ्यो दर्शकको । अहिले त सुनसान छ,' हलको अवस्थाबारे सुनाउँदै भने,'पहिला त ढोकामा चेकिङ गर्नु पर्थ्‍यो । अहिले त आवश्यक नै छैन । कलाकारहरु पनि देख्न पाइन्थ्यो । अहिले त एक्लै दिन काट्न पनि गाह्रो ।'
कहिलेकाहीँ उनलाई ढोकामा देखेर 'हल खुलेको हो ?' भन्दै सोध्ने पनि गर्छन् । उनी 'होइन' भन्दै दर्शकलाई फर्काइदिन्छन् । कोरोना महामारीका कारण कुमारी मात्रै होइन नेपालभरको हलको अवस्था यस्तै छ । कुमारी हलको यो शून्यतासँग अभ्यस्त हुँदै गए पनि कुमारलाई लाग्छ,'चाँडै हल खुले त अरु कर्मचारी साथीहरुसँग भेट हुन्थ्यो । उनीहरुसँग कुराकानी गर्न पाइन्थ्यो ।'
कोरोना महामारीका कारण सरकारले सुरुमै फिल्म हल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । अहिले लामो/छोटो दुरीका यातायत सञ्चालनमा छन् । होटल/रेस्टुरेन्ट खुले । बैंक तथा विभिन्न उद्योग खुल्दा हलमा अझै ताला झुन्डिएको छ । बन्द भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले हल खोल्ने निर्णय नगर्दा हल सञ्जालकहरु आक्रोशित छन् । चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान हल खोल्ने इजाजत नदिए हलको चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँछन् ।
'हल त जतिसक्दो चाँडो खोल्न दिनुपर्‍यो । ९ महिनादेखि हामीले कर्मचारीलाई आधा तलब दिएर राखेका छौं । बत्तीको पैसा बुझाउँदैछौं । बैंक ब्याज तिरिरहेका छौं । हलको भाडा तिर्दैछौं, 'उनले भने, 'अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र खुलिसक्यो । १२ को परिक्षा सञ्चालन भयो । भाटभटेनीमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । तर, पनि हामी सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैनौं । सरकारले हल खोल्न नदिनुका चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्‍यो । नभए हामी हलको साँचो सरकारलाई बुझाउँछौं ।'
देशभर २ सयको हाराहारीमा हल छन् । हलमा प्रत्यक्ष ३५-४० हजार कर्मचारी आश्रीत छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर ९ महिनादेखि १ लाख बढी श्रमजीवी बेरोजगार बनेको अध्यक्ष प्रधानको दावी छ । मल्टिप्लेक्स अन्तर्गतको क्युएफएक्स बन्द हुँदा करिब ७ सय जनाले रोजगारी गुमाएको बताउँछन् क्युएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन अडिगा । 'कर्मचारीहरु बेतलबी बिदामा छन् । उनीहरु त्यतिकै कुरिरहेका छन् । सरकारले नबुझेको किन हो ?' उनले प्रश्न गरे ।
निर्माता एवं कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँ परीक्षणकै लागि पनि हल खोल्न दिनुपर्ने बताउँछन् । हल बन्द हुँदा धेरै निर्माताको लगानी फ्रिज अवस्थामा छन् । फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको छ । निर्माताको उत्साहका लागि पनि हल खोल्नुपर्ने रवीन्द्र बताउँछन् । 'हुन त हल खोलेपछि दर्शक आउलान्/नआउलान् भन्ने अवस्था छैन । तर, सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर हल खोल्न दिनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'हल खोलेपछि वातावरण सहज देखियो भने हामीलाई पनि उत्साह बढ्छ । हल नखोले अरु विकल्प नै भएन । हलवाला, निर्माताभन्दा पनि चलचित्र क्षेत्र नै चलायमान बनाउन हल खोल्नु पर्‍यो । हल खोलेन भने टिकटक र म्यूजिक भिडियो बनाएर बसे मात्रै हो ।'
फिल्म हल नखुले पनि हलवालाले बत्तीको डिमाण्ड शुल्क दिनुपर्छ । बैंकको ब्याज र हलभाडा तिर्नैपर्छ । आफूहरुले बत्तीको डिमान्ड शुल्कसँगै अन्य विषयमा सरकारसँग माग राख्दै आएको बताउँछन् मधुसुदन । 'हलमा तालाबन्दी छ । बत्ती हामीले प्रयोग गरेका नै छौनौं तर त्यसको डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यो त ठूलो अन्याय हो नि,' मागहरुबारे उनी भन्छन्, '२ वर्षका लागि भ्याट र मनोरञ्जन कर तिर्न नपरोस् । चलचित्र विकास शुल्क पनि केही घटाउनु पर्ने माग छ । उद्योग चलायमान बनाउन हामीलाई यी कुरामा राहत दिनुपर्‍यो ।'
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट मौद्रिक नीतिमा पाँच प्रतिशत ब्याजदर दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म कागजमै सिमित भएको उनी गुनासो गर्छन् । हल नचले पनि हलवालाले प्रत्येक महिना २०/२५ लाखको घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले नोक्सानी कम गर्न पनि हल खोलिहाल्नु पर्ने बताउँछन् वान सिनेमाजका मार्केटिङ हेड विवेक ढकाल । 'हल क्षेत्रलाई महत्वमै नराखेको जस्तो भयो । दु:खलाग्दो कुरा पनि त्यही भयो । हलवाला धेरै नै मारमा परेका छन् । अहिलेसम्म खोल्ने अनुमति नदिएर बेवास्ता गरेको छ,' उनले सुनाए, 'हलबाहेक सबै क्षेत्र खुलेको छ । अहिले फाइदाभन्दा पनि नोक्सानी कम गरौं भन्न पनि हल खोल्न दिनु पर्‍यो । केही नगरेर नोक्सानी बेहोर्नुभन्दा दर्शकलाई हलमा बिस्तारै तान्न पनि हामीले पनि हल चलाउन पाउँ भन्ने हो ।'
पीपीई सुटमा हलका सिटमा डिसइन्फेक्ट गर्दै एक कर्मचारी । तस्बिरः अगंद ढकाल/कान्तिपुर
धेरै हलवालाले दसैंअगावै हल खोल्न पाउने आसा राखेका थिए । तर दसैं/तिहारमा पनि हल नखोलेपछि हलवाला निरास भएका छन् ।
निर्देशक विनोद पौडेल नयाँ रणनीति बनाएर हल खोल्नुपर्ने बताउँछन् । 'सुरक्षा अपनाएर हल खोल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अगाडि पनि त बढ्नु पर्‍यो,' उनी सुनाउँछन्, 'शक्तिको खेलमा अड्किरहेको छ देश । जताततै निराशा छाएको देखिन्छ । जसोतसो हल खोल्नुपर्छ अब ।'
अर्का निर्देशक नवल नेपाल भन्छन्, 'अधिकांश होटल रेस्टूरेन्ट सञ्चालनमा छन् । बजारमा चहलपहल छ । व्यापारिक हिसाबले खोलेका सबै ठाउँहरु खोलेका छन् । होटलहरु जुन मापदण्डमा खुलेका छन् फिल्म हल पनि त्यसै गरि चलाउन ल्याउन सकिन्छ । हलमा आवद्ध श्रमजीवि कर्मचारीहरु मारमा छन् । त्यसकारण हल शतप्रतिशत भोलिदेखि नै खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।'
चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन सरकारले चाँडै हल खोल्न नदिए आन्दोलनमै उत्रने बताउँछन् । 'यो विषयमा यो हप्ता वार कि पार हुन्छ । हामी अन्तिमपटक छलफलका लागि जाँदैछौं,' उनले भने । हल खोल्नेमात्र नभएर आफूहरुले राखेको माग सरकारले पूरा गरिदिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालको भनाई पनि एउटै छ,'सबै क्षेत्र खुल्यो, फिल्म हल किन खुलेन ?' हल खोल्ने अनुमतिका लागि बोर्डको तर्फबाट आठवटा चिठ्ठी सरकारलाई पठाइसकेको उनी बताउँछन् । 'बोर्डबाट २ महिनाअगाडि नै सिफारिस पठाइसकेका छौं । संचार मन्त्रालयबाट पनि हल खोल्नलाई उपयुक्त भएको भनेर सिफारिस गइसकेको छ । सिसिएमसीले मन्त्रिपरिषदमा लानु पर्ने हो । किन रोकिरहेको हो थाहा छैन,' उनले कान्तिपुरलाई भने, 'हिजोमात्रै पनि यथाशीघ्र खोल्नु पर्‍यो भनेर चिठी पठाएँ । अब चाँडै हल खोल्ने अनुमति देलान् ।'
थपे, 'हलमा भीडभाड होला भनेर सोच्नु भएको होला । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हामी हल खोल्छौं भनेपछि सरकार नआत्तिनु पर्ने हो ।'
कसरी खोल्ने हल ?
हल खुल्ने टुङ्गो नभए पनि हलवालाहरु कोभिडले निमत्याएको परिस्थितिसँगै हल सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्दैछन् । सरकारले हल खोल्ने अनुमति दिएपछि दर्शक अकुपेन्सी ५० प्रतिशत राखेर हल खोल्ने तयारी छ अधिकांश हलवालाको । 'मानव सम्पर्क कम गर्न केही उपाय अपनाउँदै छौं । इन्ट्री गेटमा चेकिङ गर्दैनौं । मानिससँगको सम्पर्क कम गर्न आफैंले चेक गर्ने योजना बनाउँदै छ । भीड धेरै भयो भने त्यसमा पनि कम गर्ने उपायको तयारी छ,' वान सिनेमाजका विवेक बताउँछन्, 'दर्शक त ढुक्कले आउने वातावरण भएपछि हलमा आउने हो । त्यसैले दर्शक आउने वातावरण बनाउने तयारी छ हाम्रो ।'
त्यस्तै म्यानेजर उमेश दर्शक बसेको वरपरको ठाउँलाई खाली राखेर सिट व्यवस्थापन गरिने बताउँछन् । 'परिवार आए भने सिटमा सँगै बस्न पाउनेछन् । तर एक्लै छन् भने दुईवटा सिट छोडेर दर्शक राख्ने उपाय अपनाउँछौं । फिल्मको टिकटमा खानेकुरा एकैसाथ मगाउन मिल्ने बनाउने तयारी छ ।' हलमा एसीको साटोमा फ्रेस हावा नै चलाउने पनि तयारी छ ।
अधिकांश हलवाला फिल्म हल खोलेपछि डिजिटल पेमेन्टमा जोड दिने तयारीमा रहेछन् । 'डिजिटल पेमेन्टमा ध्यान दिने । भीडभाड कम गर्ने । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिन्छौं । मास्क अनिवार्य भइहाल्यो । फ्रेस एयर चलाउने मापदण्ड अपनाउँछौं,' क्युएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन अडिगाले सुनाए ।
हल खोलिसकेपछि हलमा देखाइने कन्टेन्टमा समस्या देखिने अध्यक्ष मधुसुदनको भनाई छ । 'अरु व्यापारजस्तो छैन फिल्म हल । आज खोल्दैमा दर्शक आउने होइन। कन्टेन खोज्नु पर्‍यो,' उनले भने । निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ सुनाउँछन्,'हल खोल्दा पनि के फिल्म दिने त भन्ने समस्या छ । पूरानै दोहोर्‍याउने कि के गर्ने भन्ने बारेचाहिँ गम्भीररुपमा सोचविचार गर्नुपर्छ ।'
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ १८:३८